Samsung terminal များအတွက်တရားဝင် firmware များကို download လုပ်ပါ Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | ရွမ်, Samsung, လဲ tutorial
များစွာသောအသုံးပြုသူများ၏ပြtheနာများပေးသော Androidsis ပါ နှင့်အတူ၎င်း၏မူလပြည်နယ်သို့ပြန်သွားရန် Samsung ဆိပ်ကမ်းများအတွက်တရားဝင် firmware များနှင့်ဘလော့ဂ်မှတဆင့်သူ၏အများအပြားမေးမြန်းချက်; ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ဒီဇိုင်းသစ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်ကြားရန်ရှင်းလင်းသည့်ဗီဒီယိုနှင့်အတူဤဆောင်းပါးကိုရေးသားရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် sammobile.com.
En sammobile.com ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောအရာများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည် မူရင်း firmware ကို ကြီးမားသောကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ၏ဆိပ်ကမ်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်။
ဒီရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဗီဒီယိုမှာနည်းနည်းလောက်ပျောက်သွားတဲ့သုံးစွဲသူတွေ၊ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးတယ်။ firmware ကို download လုပ်ပါ သင့်ရဲ့တိကျတဲ့စက်ပစ္စည်းအဘို့အလိုချင်သော။
၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သုံးစွဲဖို့ sammobile.com ငါတို့သာလိုအပ်လိမ့်မယ် Samsung ယာဉ်မောင်း ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်မိနစ်ထက်မပိုစေဘဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်ဆန်စွာမှတ်ပုံတင်ပါ။
မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့ငါတို့အားလုံးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည် တရားဝင် Samsung ဆော့ဖ်ဝဲများ, operating system ကိုအတူဆိပ်ကမ်းများအတွက်တရားဝင်သူတွေကိုသာ အန်းဒရွိုက်, sammobile.com တွင် Bada, Windows Phone, Symbian နှင့် Limo operating system များနှင့်၎င်း၏ terminal များနှင့်ကိုက်ညီသော firmware များကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။
လိုအပ်သောဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဤကိစ္စသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှည့်ဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက်ဖိုင်များကို unzip လုပ်၍ ၎င်းမှတဆင့် run ရမည် Odinဒီတစ်ခုအတွက်မတူညီတဲ့ကိရိယာများအတွက်ဖန်တီးထားသောမတူညီသောသင်ခန်းစာများ၏ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာရန်အကြံပြုလိုပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်အသုံးပြုရန်ကိရိယာများနှင့်မတူကွဲပြားသည့်တောက်ပမှုဖြစ်စဉ်များရှိသည်။
1 သင့်ဖုန်းကို firmware အသစ်ဖြင့်မွမ်းမံနည်း
2 Samsung အတွက် Firmware ကိုဘယ်မှာယူရမလဲ
သင့်ဖုန်းကို firmware အသစ်ဖြင့်မွမ်းမံနည်း
Samsung ကိစ္စတွင်သုံးစွဲသူများအားလုံးထံသို့မွမ်းမံမှုများသည်များသောအားဖြင့်အချိန်များစွာကြာတတ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အများဆုံးစိတ်မရှည် install လုပ်ပါ သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိအခြားဒေသတစ်ခုမှ firmwareဒါကြောင့်သူတို့က OTA ကိုစောင့်စရာမလိုပါဘူး။ ဤအရာသည်သင့်ဖုန်းအားကြိုတင် update လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤအသစ်ပြောင်းခြင်းသည်သင်၏ဒေသတွင်း၌ရှိလျှင်၊ သင်သည် OTA ကိုလက်ခံရရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သင့်တွင် firmware အသစ်ရှိပြီးဖြစ်သော update ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ လာမည့် update အတွက် ပုံမှန်အရာကတော့ပြproblemsနာမရှိဘဲ OTA လက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဖုန်းများအတွက်ဖြန့်ချိသည့် Firmware updates များတွင်သင့်အနေဖြင့် updates များကိုကိုယ်တိုင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုရောက်လာရန်သင်မစောင့်လိုလျှင်၊ ကျနော်တို့ကတခြားဒေသကနေ firmware ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်Sammobile သို့မဟုတ် Stockrom ကဲ့သို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင်။ ဤဖိုင်အမျိုးအစားများကိုဤစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကဒီဖိုင်ကိုရရှိနိုင်ရန်နှင့်စတင်ရန်သင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်လုပ်နိုင်သော၎င်းကိုကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။
Firmware ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲဒါကို install လုပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဖုန်း၏အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ အပြောင်းအလဲများစွာအပြင်၊ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူတို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောစာမျက်နှာများတွင်ညွှန်ကြားချက်များရှိသည်အမှားမလုပ်မိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်အရာများကိုတစ်ဆင့်ချင်းလိုက်လျှောက်နိုင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်တွင်မအောင်မြင်ပါကဖုန်းကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်သတိထားရမယ်။
အချို့ဖုန်းများပေါ်တွင် ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ရန် ABD ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြားမော်ဒယ်များတွင် Samsung ကဲ့သို့ download mode ကိုအသုံးပြုပြီးကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဖုန်းနှင့် Odin ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အခြားအမှတ်တံဆိပ်များသည် ASUS ကဲ့သို့လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပေးပြီး၎င်းသည်ဖိုင်ကိုဖုန်း၏မှတ်ဉာဏ်ထဲသို့ကူးယူပြီး reboot လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကိစ္စရပ်အားလုံး၌အရေးကြီးသည့်အရာသည်သင်၏ကိစ္စတွင်ရှိသည့်ဖုန်းပေါ် မူတည်၍ ဘာလုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြသည့်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။
Samsung အတွက် Firmware ကိုဘယ်မှာယူရမလဲ
Sammobile အပြင်အခြားစွမ်းဆောင်ချက်လည်းရှိပါသည် တရားဝင် Samsung ဆော့ဖ်ဝဲကိုအလွယ်တကူ download လုပ်ပါ။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Stockrom ဖြစ်သည် သင်ဤ link ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်၏ဖုန်းတွင်သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏ဤ firmware ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုခေတ်မီအောင်ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Terminal များအတွက်တရား ၀ င် firmware များကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
system ကိုအများကြီးပြုပြင်မွမ်းမံထားပြီးသည့်အခါအကောင်းဆုံး။ ထားခဲ့ပါ factory စက်ရုံအလုပ်ရုံ ၁၀၀% အလုပ်လုပ်
အရာအားလုံးကိုသန့်ရှင်းစေသောမူရင်း firmware တပ်ဆင်ရန် roms အနည်းငယ်တပ်ပြီးနောက်တွင်အမြဲတမ်းအကြံပြုသည်။
Juan Carlos Rosales Guevara ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ သူငယ်ချင်းကောင်းဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကနာရီတစ်လုံးပေးတဲ့ galaxy s3 mini model GT-I8190 ကိုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်။ ၄.၁.၁.၁ မူရင်းဗားရှင်းကိုဖယ်ရှားပြီးအခြားချက်ပြုတ်ထားသောဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်ပါ။ ယခုမူရင်းဗားရှင်းကိုပြန်လည်တပ်ဆင်လိုပါက ၆၅၇ mb အလေးချိန်ရှိသော firmware site မှ rom ကို download လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ပိုမိုများပြားလာခြင်းမရှိသေးပါ။ ယခုကျွန်ုပ် Odin နှင့်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် pda ဟုထင်မြင်ယူဆသောဖိုင်ကိုသာယူဆောင်လာသည်။ သို့သော် Modem နှင့် CSC တို့ထက်အခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်။
၎င်းသည် PDA ၌သာတည်သည်။ သင်လိုအပ်သမျှတွင်၎င်းသည်ပါဝင်သည်။ သရက်။
15/04/2013 00:26 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
လူးဝစ် Manuel Manuel LupiáñezLeón ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ Samsung Galaxy Amp SGH I407 ဖုန်းရှိပြီး Sammobile ပေါ်က Rom ကိုရှာမတွေ့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သင်၏အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်သည် Rom ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မှရှာမတွေ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤပုံစံသည် Samsung မှမဟုတ်သကဲ့သို့ပုံရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ Aio လည်းဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုခေါင်းကိုက်စေသည့်ပထမဆုံး Samsung ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Luis Manuel LupiáñezLeónအားစာပြန်ပါ
ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲ။ ငါ ota မှတဆင့် update လုပ်ရန်လာသောသူတ ဦး တည်းနှင့်အတူကစွန့်ခွာချင်တယ်
၎င်းကို firmware ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းနှင့်ódinမှတဆင့် download mode ဖြင့် Flash လုပ်ခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။
Paco ကမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေပါ။ Galaxy S I9000 အတွက်ဖြစ်သည်။ စပိန်အတွက်အော်ပရေတာ မှလွဲ၍ FOP firmware option ရှိသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် Yoigo ကိုသုံးပြီး firmware ကိုအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတပ်ဆင်ပါကပြသနာရှိပါသလား။ ငါတစ်စုံတစ် ဦး ကိုထည့်သွင်းပါကဖြန့်ချိတော့မည်မဟုတ်လော သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီသည်၎င်းတို့၏အသစ်သောဆိပ်ကမ်းအသစ်များတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသော application များကို install လုပ်ခြင်းလော။
မည်သည့် firmware ကိုသင်တပ်ဆင်ပါစေဖုန်းသည်အခမဲ့ကျန်ရှိနေပါလိမ့်မည်။ သင့်တွင်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာသက်ဆိုင်ရာအော်ပရေတာနှင့်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများ၏ကန ဦး စကားဝှက်ဖြစ်သည်။
သင်တို့သည်လည်း apn ကို manually ထားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
05/04/2013 01:31 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Pedro Alejandro Carias Fuentes ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်)၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းရွေးစရာထဲသို့ဝင်ပြီးပါပြီ
firmware update ဖိုင်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း။ သင်လုပ်နိုင်လျှင်
နောက်ထပ် firmware ကိုဗားရှင်း install လုပ်ပါ။
Pedro Alejandro Carias Fuentes အားပြန်ပြောပါ
မစ္စတာ။ Francisco ကသတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့မှာ samsung corby ရှိတယ်။ ပြီးတော့ samsung genoa c3510 အတွက် firmware နဲ့ flash ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်အဆိုအရသူတို့မှာတူညီတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းတွေရှိတယ်။ ဒါအလုပ်ဖြစ်မလား အကြံဥာဏ်လား နှုတ်ခွန်းဆက်စကား =)
ဘာလို့လဲဆိုတော့ cerro နှင့် sammovile hotfiles တွေမှာ firmwa တွေအားလုံးပါနေလို့ပါ။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ယောက်မှာရှိရင်ဒါမှမဟုတ် backup ရှိရင်အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ အများကြီး🙂
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုစွန့်ခွာချင်သောသူများ qx true ကျွန်ုပ်၌မှတ်ချက်မကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်၌မှတ်စုတစ်ခုရှိသေးသည်။ တစ်ပါတ်အကြာကတစ်စုံတစ်ယောက်သည်စောင်းလာသည်၊ ပြsomeoneနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသိသည်။ အကူအညီ x faaa..thank you
ဟင် Francisco၊ ငါဗင်နီဇွဲလားမှာနေတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုစပိန်နိုင်ငံက Samsung Galaxy Core I8260 ယူလာတယ်။ ကျွန်တော့်လိုင်း movistar က။ ငါစင်မြင့်ကိုကောင်းကောင်းမဆက်သွယ်နိုင်ဘူး။ Edge မှာလုပ်လို့ရတယ်၊ ငါဗင်နီဇွဲလားအတွက် firmware ကို install လုပ်သင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကနည်းနည်းတော့ပျောက်သွားတယ်၊ မင်းငါ့ကိုပေးတဲ့ပူးပေါင်းမှုအားလုံးကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုစီကိုဘယ်လို download ဆွဲမလဲ။
ဖရန်စစ်စကိုဘယ်လိုနေလဲ !! ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်သည် sammobile အကောင့်ကို ၀ င်ရန်လိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်မှတ်ပုံတင်။ မရပါ။ ထိုပုံသည်ကျွန်ုပ်အားမပေးပါ။ ငါ Rom မကောင်းဘူးငါ imei ငါပြောင်း !! ၎င်းသည်အာဂျင်တီးနားမှအကောင်းဆုံး neo i9060l ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ Francisco Ruiz! ငါ Sammobile firmware ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူကအခမဲ့သယ်ဆောင်နိုင်မလား။
Hello Francisco, မင်းငါ့ကိုသူတို့ကငါ့ကို s2 i9100 ပေးလိုက်တယ်မင်းသိပြီငါ Kingoroot နဲ့ root လုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ငါလွှတ်လိုက်ရင် z3x ဆီကိုငါပို့လိုက်ရင် super user ကပြuserနာမရှိတာ၊ အရာအားလုံးမပါဘဲဖတ်လိုက်တာနဲ့ရုတ်တရက်ငါတစ်ခုခုရလာတယ်။ ဖုန်းကိုအဆက်ဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်သူသည်ထပ်မံဖွင့်လိုခြင်းမရှိသကဲ့သို့၎င်းသည် pc ကအသိအမှတ်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရယူခြင်း mode သို့မဟုတ် download mode ကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်အခြားဘက်ထရီဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ဖွင့်ရန်အရှိန်မြှင့်သော်လည်းဘဝ၏နိမိတ်လက္ခဏာများကိုမပြပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ အဘယ်သို့ငါ fimware အားလုံးကိုအပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားပေမယ့်ဆဲလ်ဖုန်းကငါ့ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းသည် samsung လိုဂို :, (.. ဘာအကြံပြုလိုပါသလဲ။
mauriciovillanueva2010o Villanueva ဟုသူကပြောသည်
Hello ငါ SAMSUNG I9060M ကိုဘယ်လို Flash မလဲဆိုတာသိချင်တယ်
mauriciovillanueva2010o Villanueva သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ sammobile မှ odin ပါ ၀ င်သည့် firmware ကိုကျွန်တော့် samsung core 18260l သို့ကျွန်ုပ်ကွန်ယက်လွှမ်းခြုံမှုမရှိပဲထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများသာရရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းကြောင့်ငါ့ကိုကူညီရတာလဲပြောပြလို့ရမလား
သူတို့ကကျွန်တော့်ကို samsung galaxy core SM-G360T1 ၏ရုပ်ရှင်အကြောင်းပြောပြသည်
မင်္ဂလာပါ၊ firmware ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်စာမျက်နှာမရနိုင်ပါ။ အခြားစာမျက်နှာရှိသေးလျှင်မည်သူမဆိုသိလား။
Luis Montenegro ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်၏ဖုန်း၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုမွမ်းမံလို့မရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဖုန်းသည်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲနောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်ထားကြောင်းဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုရလို့ Samsung kies လို့ခေါ်တဲ့စာမျက်နှာကို ၀ င်လိုက်သည်။
androi ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုဖွင့်သောအခါ volume key up နှင့် on / off key နှင့် key ကိုနှိပ်လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသံအတိုးအချဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း၊ ဗွီဒီယိုပြောသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်၍ အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ အစိမ်းရောင် androi အရုပ်က၎င်းတို့ပြုပြင်နေသည့်အလားပေါ်လာသည်။ ငါမိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနှင့်ဆက်လက်အဖြစ်, ငါကပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ထားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲမှုမရှိသောကြောင့်ဘက်ထရီရှင်းလင်းနှင့်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ငါမှာ samsung နဂါးငွေ့တန်းကြီးချုပ်တယ်၊ ပြီးတော့မော်ဒယ်လ်က SM-g530m လို့ပြောတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုဖွင့်သောအခါ volume key ကိုဖွင့်ပြီး on / off ခလုတ်နှင့် start key ကိုနှိပ်မိလျှင်သင်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ စာတစ်စောင်ပေါ်လာသည်ဆိုပါကနောက်ဆုံးပေါ် android ဗားရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားသောဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်သတိရမိသည်။ အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗွီဒီယိုပြောသောအတိုင်းပြုလုပ်ပြီးအသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ အစိမ်းရောင်အရုပ် android အရုပ်သည်၎င်းတို့ပြုပြင်နေသည့်အလားပေါ်လာသည်။ ငါမိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးငါဆက်ပြောသည်နှင့်ငါဘက်ထရီကိုပုံမှန်မပိတ်ဘဲပြောင်းလဲမှုမရှိသောကြောင့်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
hello francisco ကျွန်ုပ်၏ samsung note s4 ဆဲလ်ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်၏သမီးသည်စကားဝှက်ကိုမေ့သွားသည်။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ရယူရန်နည်းလမ်းဖြင့်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော် android မော်နီတာသာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နှင့်နောက်တဖန်ကျေးဇူးတင်စကားသို့မဟုတ်ငါ့ကိုကူညီမယ့်သူတစ်ယောက်မှမရွေ့။
galaxy e7 sm-e700m ၏ firmware ကိုတပ်ဆင်သောအခါ wifi ကိုမဖွင့်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ
Julio Efren Moreno ဟုသူကပြောသည်
ငါအပူတပြင်းဖြစ်၏၊ ငါကျူးဘားတွင်နေထိုင်ပြီးမိတ်ဆွေတစ် ဦး ကငါ့ကို samsung galaxy core Prime sm-g360t1 ကိုပေးခဲ့သည်။ သင်ဤတိုင်းပြည်၌နောက်ဆုံးပေါ်သိသည်နှင့်မြို့တွင်ပထမဆုံးအနေဖြင့်အများပြည်သူနေရာများတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည် WiFi ကအရမ်းရှင်းပါတယ်။ တစ်နာရီကိုအားသွင်းတယ်။ ကောင်းပြီငါအမြစ်တွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ developer ထဲမှာ oem unlocking ကိုအသုံးမပြုခဲ့ဘူး။ သူက frp က message blocker ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီ။ ငါဟာအမြတ်ကိုသုံးပြီးခြေထောက်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ metropc မှ samsung galaxy core prime sm-g360t1 ကိုရှာရန် ROM ဖုန်းကိုထိရောက်သောမျဉ်းကြောင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်မလား။
Julio Efren Moreno အားပြန်ပြောပါ
Moderator သင်သည်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သို့စာရေးနိုင်သည်၊ ငါ sammobile တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်အခက်အခဲရှိသည်
rickardo ၁၉၉၆ ဟုသူကပြောသည်
ငါ SAMMOBILE တွင်2ရက်ကြာမှတ်ပုံတင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အကောင့်ဖြင့်ကူညီပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမှတ်ပုံတင်မထားပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ။ ငါ Sammobile မှာအကောင့်တစ်ခုမဖွင့်နိုင်အောင်ကူညီပေးချင်ပါတယ်။ ကိုလံဘီယာအတွက် galaxy tab210.1 GT-P5110 အတွက် firmware ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကျွန်ုပ်သည်အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။
အီဗန် murillo ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောညနေခင်း၌ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းတွင် FRP မှပိတ်ဆို့ထားသောထုံးစံကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည် Samsung Galaxy G360XTT မော်ဒယ်လ် SM-G1TXNUMX ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိ metro pcs ကုမ္ပဏီမှဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်ကိုငါအဲဒီပြneedနာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသလား?
ivan murillo အားပြန်ကြားပါ
ယေရှု adriancamacho ဟုသူကပြောသည်
Jesus adriancamacho အားပြန်ပြောပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ Samsung Galaxy Amp SGH I407 ဖုန်းရှိပြီး Sammobile ပေါ်က Rom ကိုရှာမတွေ့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သင်၏အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်သည် Rom ကိုရှယ်ယာဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤပုံစံသည် Samsung မှမဟုတ်သကဲ့သို့ပုံရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ Aio လည်းဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုခေါင်းကိုက်စေသည့်ပထမဆုံး Samsung ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းပါတယ်။ sammobile ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ Firmware ကို unzip လုပ်လို့မရပါဘူး
ကောင်းသောညမှာကျွန်ုပ်မှာ Korean Samsung Galaxy S5 model G9006V ရှိတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွန်တော်တပ်ဆင်ချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းထဲကို ၀ င်လာတဲ့အခါမှာဖုန်းကထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်သူကကျွန်တော့်ကိုဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာပေါ့။
vicky saenz ဟုသူကပြောသည်
ငါ galaxy core2 ကိုလံဘီယာအတွက်အခမဲ့ firmware ကိုနှစ်ရက်ကြာအောင်ဒေါင်းလုပ်ချရန်ကြိုးစားနေသည်။ နာရီပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်၎င်းဖိုင်သည်ကျွန်ုပ်အား unzip ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
vicky saenz အားစာပြန်ပါ
အာဗေလ SALAZAR DIAZ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်ပြproblemနာရှိနေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်မွမ်းမံရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်၊ ယခုသင်အမြဲတမ်းအုပ်ချုပ်နေပြီးကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်သို့ ဝင်ရောက်၍ မရပါ၊ firmware အချို့ကိုကူးယူထားပါသော်လည်း Odin ကကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သည် abel@portadavision.icrt.cu Samsung M-G130HN ဖုန်းကိုမော်ဒယ်လ်ကဘာစီလိုနာတွင်နေထိုင်သောသူငယ်ချင်းများမှပေးသည်။
ABEL SALAZAR DIAZ အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် SM_G361F ကို flash လုပ်ရန် PIT ဖိုင်ကိုရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ် GT-S7582 ရှိပြီးဗင်နီဇွဲလားတွင်အသုံးပြုသော Firmware ကိုကျွန်ုပ်မရရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာတွင်မည်သည့်နေရာ၌အသုံးပြုသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ ဦး ။ သင့်မှာဒီမော်ဒယ်လ်ဖုန်းရှိရင် baseband၊ ဗားရှင်းနဲ့အခြားဒေတာတွေပြောတဲ့စက်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်မှာတွေ့ရတဲ့ဒေတာကိုငါ့ကိုပို့ပေးပါလို့ ကျေးဇူးပြု၍ တိုက်တွန်းပါ။
t-mobile မှ samsun s8 ကို update လုပ်ပြီးနောက်၎င်းသည်ခွင့်ပြုချက်မရှိသောစက်ရုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုမပြီးစီးနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဝိုင်ဖိုင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်တောင်းဆိုသည်၊ ဝဘ်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည် - Huawei P5 ၏ 30G ဗားရှင်းမရှိပါ
Tiny Gladiators2နှင့်စစ်မှန်သော Street Fighter တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်း